Sida ugu fudud ee loo bigro jabiyo gabdha ugubka ah. | Gaaloos.com
Home » galmada » Sida ugu fudud ee loo bigro jabiyo gabdha ugubka ah.
Sida ugu fudud ee loo bigro jabiyo gabdha ugubka ah.
Marka ugu horraysa xaaska aad la kulmaysid oo guriga laguu keeno, waxaad iska ilaalisaa inaad isku daydid bigrada xoog inaad ku jabiso, soomaalida baa waxay ku faanaan in ninka habeenka ugu horraysa uu furay bikaarada.
Title: Sida ugu fudud ee loo bigro jabiyo gabdha ugubka ah.